Izindaba - Ukwakheka kwegesi yemvelo
Ukwakheka kwegesi yemvelo
Uwoyela ongahluziwe kanye negesi yemvelo ngokuhlangene kubizwa ngokuthi uwoyela. Uwoyela ongahluziwe uyingxenye ye-hydrocarbon esindayo kuphela eyakheka ngokwemvelo ngendlela ewuketshezi, kuyilapho igesi yemvelo iyingxenye ye-hydrocarbon elula ekhona ngesimo segesi. Igesi yemvelo evela emthonjeni wegesi ibizwa ngokuthi igesi yomthombo, kanti igesi yemvelo ehlukaniswa nowoyela ongahluziwe emthonjeni kawoyela ibizwa ngokuthi igesi ehambisanayo.
Igesi yemvelo iyingxube yamagesi e-hydrocarbon, equkethe namanzi nokunye ukungcola. Yakhiwa ikakhulukazi i-carbon, i-hydrogen, isulfure, i-nitrogen, umoya-mpilo kanye nezakhi zokulandelela, ikakhulukazi i-carbon ne-hydrogen, ne-carbon accounting engu-65% - 80% kanye ne-hydrogen engu-12% - 20%. Ukwakheka kwegesi yemvelo ekhiqizwa ezifundeni ezihlukahlukene kuhlukile, futhi ngisho nokwakheka kwegesi yemvelo ekhiqizwa imithombo emibili ehlukene endaweni yokulondoloza amanzi kuhlukile, Ngezinga elihlukile lokuxhashazwa kwendawo kawoyela, ukwakheka kwegesi yemvelo ekhiqizwa umthombo ofanayo kuzokwenza. futhi shintsha.
I-hydrocarbon eyinhloko kugesi yemvelo i-methane, futhi iqukethe i-ethane, i-propane, i-butane, i-pentane, inani elincane le-hexane, i-heptane namanye amagesi asindayo.
Ukuhlukaniswa kwegesi yemvelo
Kunezindlela ezintathu zokuhlukanisa igesi yemvelo
(1) Ngokwezici zediphozithi yezimbiwa, ihlukaniswe ikakhulukazi igesi yomthombo wegesi kanye negesi ehambisanayo.
Igesi ehlobene: isho igesi yemvelo ehlukaniswa nemithombo kawoyela engahluziwe.
Umthombo wegesi: ubhekisela kugesi yemvelo evela emthonjeni wegesi.
(2) Ngokokwakheka kwe-hydrocarbon yegesi yemvelo (okungukuthi, ngokusho kokuqukethwe kwe-hydrocarbon ewuketshezi kugesi yemvelo), ingahlukaniswa ibe igesi eyomile, igesi emanzi, igesi engenawo amandla kanye negesi ecebile.
C5 definition method — ukuhlukaniswa kwegesi eyomile nemanzi
Igesi eyomile: ibhekisela kugesi yemvelo enoketshezi olusindayo lwe-hydrocarbon ngaphezu kwe-C5 (i-pentane) kanye nesigaba sokwakheka kanye nezakhiwo ezingaphansi kuka-13.5 cubic centimeter ku-cubic meter engu-1 evamile yegesi yemvelo.
Igesi emanzi: ibhekisela kugesi yemvelo enoketshezi lwe-hydrocarbon ngaphezu kwe-C5 ephakeme kuno-13.5 cubic centimeter ku-cubic meter evamile engu-1 yegesi yemvelo.
C3 definition method — ukuhlukaniswa kwegesi empofu necebile
Igesi engenawo amandla: ibhekisela kugesi yemvelo enoketshezi lwe-hydrocarbon ngaphezu kwe-C3 ngaphansi kuka-94 cubic centimeter ku-cubic meter evamile engu-1 yegesi yemvelo.
Igesi ecebile: ibhekisela kugesi yemvelo enoketshezi lwe-hydrocarbon ngaphezu kwe-C3 ephakeme kuno-94 cubic centimeter ku-cubic meter evamile engu-1 yegesi yemvelo.
(3) Ngokusho kokuqukethwe yigesi ene-asidi, igesi yemvelo ingahlukaniswa ibe igesi ene-asidi negesi ehlanzekile.
Igesi yemvelo emuncu: ibhekisela kugesi yemvelo equkethe inani elikhulu le-sulfide, i-carbon dioxide kanye nenye igesi emuncu, okufanele iphathwe ngaphambi kokuba ifinyelele izinga lokuthuthwa kwamapayipi noma inkomba yekhwalithi yegesi yempahla.
Igesi ehlanzekile: isho igesi ene-sulfide encane noma engekho, engathunyelwa ngaphandle futhi isetshenziswe ngaphandle kokuhlanzwa.